पेड्रो Ximénez सॉस - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
म सँधै यो सास बनाउन चाहन्थें किनकि मैले कोशिश गरेको कुनै पनि डिश यसको स्प्लासको साथ अनुभवी हुन्छ रक्सी मलाई मन पर्यो। यो पछिल्लो सप्ताहन्त अवसर अन्त मा दिइएको छ। म पूर्ण विस्फोट मा फ्रीजर थियो र यो केहि चीजहरु मेरो पति जब यो खाना पकाउने मा आउँछ। उहाँ सधैं मलाई भन्नुहुन्छ: "के हामी दुबै फ्रीजर भरिएको छ कि बर्फ को एक झोला मा फिट हुन सक्दैन?" र यो देखी कि यी क्रिसमस मितिहरु आउँदै थिए र कि म एक ठाउँ को आवश्यकता छ, म केहि अन्य सानो कुरा defrost गर्न थाले।
यी छुट्टीहरू बनाउनको लागि १० उत्तम थर्मोमिक्स क्रिसमस रेसिपीहरू
मैले एउटा कम्मर तयार पारे नुन पोर्क र यो यो संग यो चटनी तयार गर्न को लागी मलाई भयो। मैले भन्नै पर्छ हामी यो माया गर्छौं। एक छ राम्रो बनावट मीठो स्पर्शको साथ जुन मासुको नुनको प्रतिकारको लागि स्वादिष्ट थियो।
मसँग अलिक बायाँ र दायाँ प्रेमीहरू बाहिर आए, किनकि मैले मेरी आमालाई यो गरें भनेर भनेकी थिएँ साल्सा र मलाई वाक्य समाप्त नगरीकन, उसले मलाई टिप्पणी गर्यो: "ओह! के तपाइँ यो प्रयास गर्न को लागी थोरै छोड्नुहुन्न ...? " त्यसैले तुरुन्तै यो समाप्त भयो।
यो गर्न धेरै सरल छ र यो आदर्श हो मासु को लागी sirloin वा पोर्क कपाल टाइप गर्नुहोस्, खेल मासु र म सोच्दछु कि म यसको लागि मेरो दिमागमा राखिएको भरिएको टर्कीको लागि तयार गर्दछु।
1 पेड्रो Ximénez सॉस
मासु र खेल साथ दिन एक आदर्श सॉस।
पेड्रो Ximénez वाइन को 350 ग्राम
२०० ग्राम लिक्विड क्रीम
१ चम्मच कर्नस्टार्च
हामीले रक्सीलाई गिलास र कार्यक्रममा राख्यौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
जब क्रमादेशित समय समाप्त हुन्छ, हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि तरल लगभग आधा द्वारा कम गरीएको छ। क्रीम, seasonings र रस र कार्यक्रम मा भंग मकै स्टार्च जोड्नुहोस् Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
थप जानकारी - नुन पोर्क कम्मर
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, अण्डो असहिष्णु, १/२ घण्टा भन्दा कम, साल्सास
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » साल्सास » पेड्रो Ximénez सॉस
नमस्कार मलाई शंका छ यो माला मालागा कुमारीबाट आएको हो? धन्यवाद
जुआनालाई जवाफ दिनुहोस्
यस प्रश्नको साथ जुआना तपाईले मलाई समात्नुभयो! ठिक छ, म वाइनमा धेरै जानकार छैन र यो मेरो बुबाको उपहार थियो जसले मलाई सधैं सुन्नुहुन्छ कि उहाँ चटनी बनाउन चाहानुहुन्छ, तर मलाई थाहा छैन कि त्यो समान छ कि छैन।
पेड्रो ज़िमेनेज वाइन मालागा भर्जिन भन्दा सुक्खा छ, मलागा भर्जिन मालागाको लागि मात्र विशिष्ट छ र पेड्रो ज़िमनेज कर्डोबादेखि काडिजसम्मको क्षेत्रमा देखा पर्दछ।
Naty लाई जवाफ दिनुहोस्
स्पष्टिकरणका लागि धन्यबाद, नेटी। बधाई र शुभ छुट्टि !.
नमस्ते, मलागा भर्जिनको साथ म यो सिफारिस गर्दिन, यो एक कमजोर वाइन हो र यसले धेरै स्वाद गुमाउनेछ। पेड्रो Ximenez किन्नुहोस्, जोसँग धेरै शरीर छ।
सेभिलानोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते सिल्भिया, म सामान्यतया माथि माथिल्लोमा राख्छु र यो स्वादिष्ट हुन्छ, टोस्टमा मिसिन्छ
ROSA लाई जवाफ दिनुहोस्
हो रोजा, तपाईं आफ्नो सुझावको साथ सही हुनुहुन्छ। मैले यसलाई एक रेस्टुरेन्टमा प्रयास गरें र यो विलासी हो, म यो पनि सिफारिस गर्दछु। धन्यबाद र शुभकामना
तर कस्तो किसिमको pate? अग्रिम धन्यवाद।
यहाँ वरिपरि यस नुस्खालाई हेर्न पाउनु कत्ति खुसीको कुरा! उनले क्रिसमसको दिन बनाउने योजना बनाएका साथै सेरानो हेम र परमेसन चीजले भरिएका केही भित्ता रोलहरू पनि बनाए। म यो अवसर लिन्छु र यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, तपाईं मेरो लागि धेरै शंकाहरूको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हामी are हौं, के म दुबै रकम लिन्छु? के म यसलाई एक दिन पहिले बनाउन सक्छु, यसलाई फ्रिजमा राख्छु र अर्को दिन यसलाई तात्न सक्छु? व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद। म तपाईंको वेबसाइटमा हुक छु, जान जारी राख्नुहोस् ताकि तपाईं महान कार्य गर्नुहोस्। अभिवादन।
Rocio लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि रोसियोले तपाईलाई एउटा हात दिएको थियो यदि तपाई केवल यो सास बनाउनको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने। People व्यक्तिको लागि, मलाई लाग्छ कि यस रकमसँग तपाईंसँग प्रशस्त मात्रामा छ, यो रोलहरू भिजाउने बारेमा होइन। र तपाइँसँग यससँग गर्नुभन्दा पहिले कुनै समस्या छैन जब समय आउँदछ, तपाईं यसलाई न्यानो पार्नुहुन्छ। म आशा गर्छु तपाई धनी हुनुभयो, तपाईले हामीलाई भन्नुहुनेछ।
तपाईंले मेरो जीवनबाट प्राप्त गरेको आनन्द के हो यो मेरो पिताको कानूनमा मनपर्दो हो र म यो कसरी गर्न सक्छु भनेर मलाई थाहा छैन, अब म यो बनाउन सक्दिन र म उनलाई सर्पिस गर्नेछु, एउटा चुम्बन हुनेछु।
मारिया, राम्रो तपाईं आफ्नो ससुराको साथ रानी जस्तै बस्न जाँदैछन्, किनभने यो राम्रो देखिन्छ। घरमा हामी यो माया गर्थ्यौं र यस क्रिसमसमा म तपाईंलाई मेरो ससुराको राय जान्न पनि तयार पार्नेछु जो एक राम्रो आलोचक हो। म तिमीलाई यसको बारेमा बताउँछु। शुभकामना
जहिले जहिले, अपराजेय, दुबै तपाईका व्यञ्जनहरू र टिप्पणीहरू तपाइँ तिनीहरूलाई परिचय गराउन। सत्य यो हो कि म प्रत्येक दिन तपाईंको ब्लगमा हेर्छु र तपाईंले मलाई खाना पकाउनको मेरो प्रेम पुनः प्राप्त गर्न बनाउनुभएको छ र वैसे पनि मेरा केटीहरूसँग हुनुहोस् र त्यस्तै केटीहरू धेरै दिउँसो पकाउने बनाउँदैनन्। धन्यबाद।
आह .. कि यी सबै संग म बिर्सनुभयो .. तपाईं कसरी नुन संग कम्मर गर्नुहुन्छ? Thermomix संग पनि ???
सोनियालाई जवाफ दिनुहोस्
सोनिया मँ खुसी छु कि तपाईं हाम्रा व्यंजनहरू मन पराउनुहुन्छ र ती सबै भन्दा तपाईं आफ्ना प्रियजनहरूलाई उनीहरूसँग बाँड्न राम्रो समय पाउनु भएको छ, त्यस्तै कुरा हो, यसले हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ र हामी अरूहरूसँग रमाउँछौं। केहि दिनमा म नुनको साथ कम्मरको नुस्खा प्रकाशित गर्दछु तर हो, म यसलाई लगभग minutes० मिनेटमा भेरोमामा गर्दछु र यो सासको साथ उत्तम छ।
जुआना, यो मालागा रक्सी होईन, यो दाखमद्यले पेद्रो ज़िमेनेज लेबलमा राख्दछ म यसलाई मर्दाडोनामा किन्छु, आशा गर्छु कि मैले तपाईंलाई मद्दत गरें।
नमस्ते सिल्विया, म पनि यस चटनीको लागि साइन अप गर्दछु, किनकि मैले थर्मोमिक्स किनेको छ, मलाई आशा छ यो पनि तपाईंसँगै आउँदछ, मलाई यो मदिराको स्वाद मनपर्दछ, यदि तपाईंले यस सॉसलाई छिट्टै राख्न कम्मरको रेसिपी राख्नुभयो भने।
म मेरो साथी जुआनालाई भन्छु कि यो दाखमद्य मोन्टिला-मोरिलसबाट छ, उत्पत्तिको सम्प्रदाय, यो बोतलले नाभिसाले बोकेको छ
एन्टोनिया निश्चित छ कि तपाइँको लागि ठूलो फर्कन्छ र तपाइँका प्रियजनहरूलाई चकित पार्नुहुन्छ। यस्तो प्रशस्त मद्यको साथ यो असम्भव छ कि यो राम्रो बाहिर आउँदैन हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा र धन्यवाद।
अमाडा मोरेनो भन्यो
सबैभन्दा पहिले म तपाईंलाई थर्मोमिक्स व्यंजन विधिको ब्ल्गमा बधाई दिन चाहन्छु, किनकि तिनीहरू ठूलो सहयोगका छन्, तर मेरो प्रश्न विशेष गरी यो पेड्रो क्मिनेज सॉसको लागि हो, म यो जान्न चाहन्छु कि के मलाई यसलाई बतखको स्तनसँग मिसिन सकिन्छ कि? म तपाईंको उत्तरको लागि कुर्नेछु, धेरै धेरै धन्यवाद।
Amada Moreno लाई जवाफ दिनुहोस्
प्रिय, कुनै श doubt्का बिना, बत्तख स्तन ठूलो हुन सक्छ। तपाईंले वास्तवमा मलाई एउटा विचार दिनुभयो र हुनसक्छ मैले यो राजाहरूको भोजनको लागि तयार पारेको छु।
नमस्कार, तपाईंको नाम प्रिय छ, तपाईंले मलाई एक मित्रकी आमाको सम्झना गराउनु भयो, जससँग बच्चाको रूपमा म्याड्रिडको सुधारिएको क्षेत्रमा बस्दछु, मैले कहिले पनि पेड्रो गिमेनेजको चटनी बनाएन, तर भोली म यो गर्न गइरहेको छु, मलाई आशा छ यो राम्रोसँग बाहिर जान्छ, यद्यपि मेरो लागि मशिनमा जे गर्छु सबै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म खुशी छु, म मर्काडोनाबाट रक्सी किनेको छु, यो वास्तविक सम्पत्ति हो, राम्रो शेरी, यसको लागत 3.65..XNUMX युरो छ वा कम कुंवारी मालागा डबल सौभाग्य मेर क्रिसमसको लायक छ
एलिसियालाई जवाफ दिनुहोस्
अना Agudo Jimenez भन्यो
नमस्कार, पहिलो चीज तपाईंलाई बधाई दिन महान पृष्ठमा तपाईंसँग जुन यो मेरो लागि प्रयोग हो र मँ तपाईंले धेरै चीजहरू प्रकाशित गर्छु। जब तपाईले आज पोस्ट गर्नुभएको दाखमद्यको चटनी मैले देखेँ भने, म तपाईलाई सोध्न चाहान्छु कि तपाईले मलाई रास्पबेरी वा रातो फलको सासको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि, मैले यसलाई रेष्टुरेन्टहरुमा खाएको छु र म यसलाई साँच्चिकै भेट्न चाहन्छु।
धन्यवाद धेरै धेरै।
Ana Agudo Jimenez लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते सिल्भिया, मेरो टिप्पणीको यस नुस्खासँग कुनै सरोकार छैन, तर मैले तपाईंलाई पढेकोले र म तपाईंलाई पछ्याउँछु र तपाईंले मलाई धेरैपटक बचाउनुभएको छ, म तपाईंलाई सोध्दछु, के तपाईंसँग मकैको पीठोको पिज्जा पिठो बनाउनको लागि एक विधि छ? मैले प्रयास गरेको समय एकदम दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। अग्रिम धन्यवाद
Inma लाई जवाफ दिनुहोस्
ईन्मा, म कल्पना गर्छु कि तपाईंले मलाई यो प्रश्न सोध्नुभएको छ किनकि तपाईंसँग घरमा सेलिआक रोग लागेको कोही छ। मैले त्यो पिठोको साथ पिज्जाको आटा कहिल्यै पारेको छैन तर मसँग सिलियाक भतिजी छ र उनको बुबाले उनलाई विशेष पिठोले पिज्जा बनाउँदछन् कि किन्न् कि उनी कति मन पराउँछन् कि कति राम्रो हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँदछ कि अब उसले even को लागि पनि यस्तै बनाउँछ जो परिवार मा छन्। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने म तिनीहरूलाई सोध्छु। शुभकामना
हिजो फेसबुकमा मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ कि आज म यो असफल बिना नै गर्दछु, र यो नै हो, मैले यसलाई सानोमा स्कूलमा लैजाँदा यसलाई घटाउँदै छु, र परिणाम राम्रो भयो। अनुग्रहको स्पर्श, म हिजो सुन्तलाबाट बाहिर दौडेँ र टेंजरिनको साथ जुस प्रतिस्थापित गरें (मैले तिनीहरूलाई क्यास्टेलन अन्तिम पुलबाट ल्याएँ)
PAZ लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई पाज मन परेकोमा म खुशी छु, यो लग्जरी चटनी हो र पक्कै पनि मैले तपाईको सुझाव सम्झन सक्छु किनकि यस प्रकारको ट्यान्जाइनले गर्दा तपाई आश्चर्यचकित हुनुभयो कि तपाई सफल हुनुहुनेछ। मेरी क्रिसमस!
के तपाइँ मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि कसरी तपाईं नुन मा सुँगुर को टेंडरलिन गर्नुहुन्छ? म आज राति यो गर्न चाहन्छु। १२/30० मा बनाउने विधिहरू अभ्यास गर्दैछु। धन्यवाद!
राकेल रेसिपी केहि दिनमा प्रकाशित गर्नका लागि निर्धारित गरिएको छ, तर तपाईंले केवल भेरोमा भित्र ओभन नुन सहित कम्मर कभर गर्नुपर्नेछ र यसलाई लगभग minutes० मिनेटको लागि बनाउनुपर्नेछ, पहिले एक लिटर तातो पानीको पानीमा राखेर। शुभकामना
नमस्कार फेरि सिल्भिया, मलाई जवाफ दिनको लागि धेरै धन्यबाद, तर ... .. म पेड्रो Ximénez वाइन कहाँ पाउन सक्छ?
नमस्कार प्रिय, मैले यो मर्काडोना र क्यारेफोरमा खरीद गरेको छु। शुभकामना।
नमस्ते सिल्भिया, मैले भर्खर तपाईको रेसिपी पृष्ठ पत्ता लगाएँ र मलाई लाग्छ कि यो शानदार छ। म क्रिसमसको पेड्रो ज़िमेनेजको चटनी बनाउन चाहन्छु तर मसँग एउटा प्रश्न छ। तपाईले वाइनलाई घटाउनको लागि कहिले कप राख्नुहुन्छ?
अग्रिम धन्यवाद र म तपाईंलाई यसको बारेमा बताउनेछु।
नमस्ते पिलर, यो कपको साथ गरियो। प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस्, यो स्वादिष्ट सास हो। हाम्रो ब्लगमा स्वागत छ र म आशा गर्दछु कि तपाईं हाम्रा रेसिपीहरू मनपराउनुहुनेछ। शुभकामना।
मेरी एस। पाम जीसी भन्यो
यो नुस्खा र सबै टिप्पणीहरू पढ्दा म यो हप्तामा यसलाई सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्दछु, यो कस्तो छ भनेर हेर्न धन्यवाद
Mary s लाई जवाफ दिनुहोस्। पाम जीसी
आना बेलेन भन्यो
नमस्ते, मलाई थाहा छैन यो कस्तो भइरहेको छ। मैले गेनोभिज केकमा टेक्स्ट सन्देश राखेको छु।
Ana belen लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार आना बेलन, मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईंलाई जवाफ दिन सक्दिन, तपाईंलाई यो काम थाहा छ। मैले तपाईंलाई पहिले नै उत्तर दिएँ, म तपाईंको उत्तरको लागि पर्खिरहेको छु। शुभकामना।
नमस्ते, यो म पुनः हुँ, म अलि बेढिलो हुँ, उनले मलाई भन्छन् कि मेरो टिप्पणी संयमको लागि पेन्डि and छ र म बुझ्दिन। यो मैले पहिलो पटक गरें। मलाई थाहा छैन एसएमएस आयो कि भए, धन्यवाद तपाईं र मेरो बिरामीलाई माफ गर्नुहोस्
नमस्कार अना बेलन, कहिलेकाँही यो हुन्छ, तर यो पहिले नै प्रकाशित भइसकेको छ। हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
यस पृष्ठको टुक्रिमा तपाईंलाई बधाई छ जुन तपाईंलाई छ !!! एउटा प्रश्न, वाइन सेतो वा रातो हो ??? धेरै धेरै धन्यबाद
नमस्कार आना, पेद्रो ज़िमेनेज वाइन जेरेजबाट रातो रक्सी हो।
हामीलाई र मेरी क्रिसमसलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद!
नमस्कार मालागा को स्वेट वाइन को लागी कमेन्ट गर्ने साथीलाई, उनीलाई भनेको छ, यो मालागाबाट मिल्दैन यो स्वेटबाट मिल्छ, आईटी स्वेट हो र यो पेड्रो एक्समेन्जबाट आउँदछ, यो धेरै राम्रो छ
नमस्ते, तपाई मलाई रास्पबेरी वा रातो फलको सासको बारेमा केहि भन्न सक्नुहुन्न ?????? शुभकामना।
हाय अना, मसंग मासुको लागि धेरै धनी रास्पबेरी सॉस छ। मैले तपाईंको लागि नुस्खा राखें:
मासुको लागि रास्पबेरी सॉस:
अवयवहरू: १ ओलोट वा १० ग्राम चाइभ्स, जुलियानमा १ नीबूको छाला, जुलिनमा एउटा सुन्तलाको छाला, १sp० ग्राम रास्पबेरी जाम (आधा जार), डिजोन सरसोंको १० ग्राम, पोर्ट वाइनको १ 1० ग्राम, नुन, कालो मिर्च, लाल मिर्च र अदुवा
तयारी: - यसको लागि तयार गरिएको विशेष उपकरणको साथ निम्बू र सुन्तला ज्युलिनलाई तयार गर्नुहोस्, वा सानो र राम्रा-धारदार चाकूले दुबै सिट्रस फलहरूको रंगीन छालाको पट्टि मात्रै हटाउनुहोस् र त्यसपछि तिनीहरूलाई एकदमै बारी बारीमा काट्नुहोस्, अलग राख्नुहोस्।
- कालोमा कालो वा चाउभ्स राख्नुहोस् र टर्बो १ वा २ पटक थिचेर काट्नुहोस्। टुक्राहरूलाई गिलासबाट तल ल्याउनुहोस्।
- जाम र रायोस थप्नुहोस् र on सेकेन्डको वेगमा 4.. onion-4 गतिमा अपरेसन दोहोर्याउनुहोस् यदि पूरा प्याजका टुक्राहरू छन् भने। स्पटुलाको साथ फेरि तल्लो तान्नुहोस् जुन गिलासको पर्खालहरूमा फैलिएको छ।
बायाँ पट्टि घुम्नुहोस्, वाइन, मसला, जुलियन र प्रोग्राम थप्नुहोस् minutes मिनेट १००º vel १ ताकि चाइभ्स कच्चा स्वाद नपाउन् र सबै मदिरा वाफ हुन्छ।
म यो पेड्रो Ximénez कटौती बतख फोइ र ग्रील्ड बतख स्तन सँगसँगै गर्दछ, र यो सँधै एक सफल हुन्छ !!!
Marisol लाई जवाफ दिनुहोस्
खुशीका छुट्टिहरु, मारीसोल! यो सत्य हो, यो सास बतख फोइसँग धेरै धनी छ।
नमस्ते! मैले भर्खर तपाईको ब्लग पत्ता लगाएँ र मलाई मन पर्यो। एक शंका, यो सास स्थिर गर्न सकिन्छ। यो यो हो कि मैले यो आज रातीको लागि बनाईएको छु र मलाई लाग्छ कि यो छोडिनेछ। मेरी क्रिसमस!
क्यारोलिनालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि क्यारोलिना तपाईं यसलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाईंलाई यो आवश्यक हुन्छ, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, राम्रोसँग तातो गर्नुहोस् र त्यस्तै भयो।
मुबारक छुट्टीहरु !!
माथिको टिप्पणी एक प्रश्न हो। यो स्थिर गर्न सकिन्छ? यो त्यो भीड मा कुञ्जी हराएको छ कि छ। धन्यबाद।
नमस्ते ... पृष्ठमा सबै बधाईको पहिलो !!! ... मसँग Thermomix केहि समयको लागि थियो र मँ सधै नयाँ रेसिपीहरू बनाउनको लागि खोजिरहेको छु। मैले तपाइँको पृष्ठ फेला पारेँ र यो त्यहाँ एक उत्तम हो ...
यस चटनीको बारेमा प्रश्न ... म यसलाई नयाँ सालको पूर्वसूचनामा मासुसंगै राख्न चाहन्छु ... हामी १२ मान्छे छौं ... के यसले पर्याप्त बाहिर आयो ????? धन्यबाद र सबैलाई नया सालको बधाई!
Elektra लाई जवाफ दिनुहोस्
लगभग बाह्र डाइनरहरूको लागि, म दुब्लो रकम गर्दछु ताकि छोटो नहोस् र यदि तपाईंसँग केहि बाँकी छ भने तपाईं यसलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अर्को दिनको लागि राख्न सक्नुहुन्छ।
म जान्न चाहन्छु कि पेड्रो Ximene कस्तो किसिमको हो, जब म यसलाई किन्न गएको छु मैले चार विभिन्न बोतलहरू देखेको छु, एलिसियाको टिप्पणीको सन्दर्भमा, उनी भन्छिन् कि यसको लागत 3,65.. costXNUMX छ, किनकि मैले देखेका सबै वस्तुहरू बढी खर्च गर्छन्, मलाई थाहा छैन यदि तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा खास गरी एक हो भने।
एलिसालाई जवाफ दिनुहोस्
एलिसा, सत्य यो हो कि तिनीहरूले यो मलाई दिएका छन् र म तिमीलाई राम्रोसँग के भन्ने भनेर राम्रोसँग थाहा छैन, तर यो भन्दा दुई गुणा बढी लाग्दछ र यो दाखमद्य मिठो छ।
मलाई थाहा छैन यदि मैले तपाईंलाई केहि सहयोग गरेको छु भने।
सिल्भिया र एलेनासँग मैले पहिले नै फ्रिक्रान्डो चटनी पाएको थिएँ जुन मैले खोजिरहेको थिएँ र थर्मोमिक्समा पार गरिसकेको थियो, के हुन्छ मलाई थाहा छैन यो कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर यदि मलाई मद्दत गर्न सक्दछु म कसरी पठाउँछु भन्ने म तपाईंलाई पठाउँछु।
नमस्कार आना बेलन, तपाईको खाना पकाउन कत्ति राम्रो छ! यदि तपाईं निम्न ईमेलमा पठाउन सक्नुहुनेछ: thermorecetas@hotmail.com
म पेड्रो Ximéne सॉसको साथ नुनको साथ कम्मर बनाउन चाहान्छु। आठ व्यक्तिको लागि, म भारोमामा दुई कम्मर राख्न सक्छु? र चटनी, नुस्खा को मात्रा पर्याप्त हुनेछ? धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ।
नमस्ते मारिया होसे, सससको सन्दर्भमा मैले दुई गुणा बढी गर्ने छ र कम्मर तपाईं फिट गर्न सक्नुहुन्छ वा नहुने आकारमा निर्भर गर्दछ। प्रयास गर्नुहोस् कि उनीहरू फिट छन् कि छैन। शुभकामना।
हिजो मैले तपाईको ब्लक भेट्टाए ... बधाई र धेरै सफलता !!! म सास तयार गर्दैछु र भोली म यस सॉसको साथ भुनीको मासु र आधारभूत स्याउ प्युरीको साथ गर्नेछु ... म तिमीलाई यसको बारेमा भन्नेछु।
स्वागत छ, मोनिका! तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म खुशी छु। म आशा गर्दछु कि तपाईको भुनीको मासु साँच्चै नै राम्रो आउँछ। शुभकामना।
तपाईको पृष्ठमा बधाई छ, मलाई पेद्रो ज़िमेनेज सॉस मनपर्दछ र म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छु कि यो उत्कृष्ट शेरी वाइन हो सबैको जस्तो। यो धेरै मीठो छ, पेड्रो ज़िमेनेज अ gra्गुरबाट बनेको छ र धेरै किसमिसको स्वाद लिन्छ किनकि अंगूर घाममा छोडियो। त्यहाँ धेरै ब्रान्डहरू छन् तर मेरो मनपर्ने निस्सन्देह एल्वारो डोमेक वाइनरीबाट एक हो, यसका धेरै पुरस्कारहरू छन्।
नमस्कार इसाबेल, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यबाद र म त्यस वाइनरीबाट एउटा खोज्नेछु। बधाई छ र मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई हाम्रो ब्लग मनपर्‍यो।
धेरै धेरै धन्यबाद, मैले हिजो यो बनाएको र यो अति उत्तम छ
ठीक छ, राम्रो छ, फेरि बधाई! कस्तो राम्रो कुरा! म तपाइँको वेबसाइट मा धेरै अंकुश छु। आज मैले केही sirloins को लागि यस सॉस बनाई जुन मलाई फ्रिजरमा थियो, के अति उत्तम चीज हो र घरमा क्रिसमसको गन्ध ... हो, यो केहि ढिलो भए पनि। यदि यो कसैको लागि काम गर्दछ भने, मैले करीव १०-१२ sirloins को लागी पूर्ण रकम पाएको छु। मैले कसरी पाएँ? मलाई लाग्छ कि म तपाईंबाट धेरै चीजहरू सिक्नेछु, फेरि बधाई!
एमलुइसालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको पृष्ठमा बधाई छ।
पेड्रो ज़िमेनेज ससको साथ सुँगुरको टेंडरलिनको विधि सम्बन्धी, के तपाइँले यसलाई पोर्ट वाइनको साथ बनाउनुभयो? मसँग पूरै बोतल छ र मलाई थाहा छैन कि यो मदिराले राम्रोसँग जान्छ कि भनेर। यदि तपाईंसँग यो मद्यको साथ कुनै नुस्खा छ भने, तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ।
इसाबेल पोर्ट वाइनको साथ होईन मैले कोशिश गरेको छैन। सजीव र हामीलाई बताउनुहोस्। म तपाइँलाई पोर्ट वाइनको साथ पेटाको लिंक छोडछु जुन उनीहरूले भन्छन धेरै राम्रो छ। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस् कसरी।
मलाई शंका छ र यो यो हो कि म यस कोठाको साथ नुन सहितको कम्मर बनाउन चाहन्छु केही साथीहरूलाई खाजामा निम्त्याउन (कुल चार), मसँग भान्साको लागि धेरै समय छैन, त्यसैले म मासु पकाउन चाहान्छु। एक दिन अघि। तपाई एकदम चिसो चटनीको साथ चिसो मासु राख्न सक्नुहुन्छ? o तपाईं मासुलाई कसरी तताउन सक्नुहुन्छ कि यो एकदम सुख्खा हुँदैन? धन्यबाद
नमस्ते, मलाई थाहा छ यदि तपाईं काली मिर्चको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सेतो मिर्च वा कालो मिर्च हो र यदि यो जमिनमा वा अन्नमा छ भने, धन्यवाद
सामान्यतया म पाउडर राख्छु र कहिलेकाँहि सेतो र अर्को कालो प्रयोग गर्छु, जुन चिन्त्रीमा छ।
के तपाईं अर्को ब्रान्ड वाइन राख्न सक्नुहुन्छ? किनकि मैले मर्काडोना र क्यारेफोरलाई हेरेका थिए र ती छैन। मैले अझै धेरै हाइपर हेर्नु पर्छ तर मलाई गाह्रो छ। (म ग्रान क्यानरियाबाट हुँ)। धन्यबाद
मारिया, केही हदसम्म मीठो दाखमद्यको साथ यो यसको लायक पनि हुन सक्छ।
सिल्भिया म तपाईलाई मेरो नयाँ ईमेल ठेगाना छोडछु, कृपया मलाई व्यंजनहरू पठाउनुहोस्, ईमेल हो uchirubi@gmail.com
यस नुस्खाका लागि धेरै धन्यबाद, मैले मासुको टेंडरलोइन बनाउने बारेमा सोचेको छु, शीर्षमा एक नयाँ ताजा फोइ र यस चटनीको साथ ... सत्य यो हो कि मैले यसलाई धेरै समय अघि एउटा रेस्टुरेन्टमा प्रयास गरें र पकवानले मलाई मोह गर्यो। म यसको प्रयास गर्न जाँदैछु र म आशा गर्दछु कि यो राम्रोसँग राम्रो हुन्छ वा राम्रो हुन्छ मैले प्रयास गरेको भन्दा राम्रो .. एक चुम्बन!
तामारालाई जवाफ दिनुहोस्
पक्कै पनि ती अवयवहरूको साथ तपाईं सफल हुनुहुनेछ र सॉस उत्कृष्ट छ!
नमस्ते! मात्र तपाई मलाई सॉसको बारेमा मेरो राय दिनुहोस्। आज केही भान्जा भाइहरू खान आए र मसँग केहि पनि तयार छैन, किनभने मसँग आवश्यक सामग्रीहरू थिए जुन म काममा तल झरे, र कुल सफलता! मैले यसलाई लहसुनको साथमा कम्मरको केही फलेटहरूसँग राखें जुन अलि तेलले प्यानमा बनाएँ। उनीहरूले मलाई यो क्रिसमस घर जाँदा मैले फेरि गर्नु पर्छ भनेर भनेको छ। धन्यबाद केटीहरू, तपाई अद्भुत हुनुहुन्छ, तपाईका सबै व्यंजनहरू जुन मैले पहिले नै कोशिश गरिसकें। मैले तिनीहरूलाई मिठाईको लागि दुई चकलेटहरू, र दिउँसो स्नैक्सको लागि सुन्तलाको स्पन्ज केक पनि बनाए। सबै उत्तम।
म धेरै खुसी छु रसियो कि तपाईले यो धेरै मन पराउनुभयो, सत्य यो हो कि यो सास हो जसले कसैलाई पनि उदासीन छोड्दैन।
नमस्कार शुभ दिन !!!
मैले रास्पबेरी सॉसको लागि एक नुस्खा पढेको छु र मेरो प्रश्न यो हो जब तपाईले बायाँ मोड पल्टाउनु हुन्छ भने (मलाई थाहा छैन म कसरी गर्न सक्छु) मसँग थर्मोमिक्स २१ छ र मलाई थाहा छैन यो कहाँ गरिएको छ, यदि तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने। म यसको कदर गर्छु म क्रिसमसको लागि यो गर्न चाहन्छु।
भिकीलाई अभिवादन छ
TM-21 मा विकी, तपाईको बाँया पालो छैन तर तपाई ब्लेडमा बटरफ्लाइ स्पीड १ राखेर यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ।
सब भन्दा पहिले तपाईको ब्लागमा बधाई छ, मलाई यो मन पर्छ र यो मेरो बेडसाइड पुस्तक हो !!!
यो क्रिसमस मसँग मेरा आमा बुबा बुबा हुनुहुन्छ र सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईंको ब्लग ब्राउज गरिसके पछि लोमोमा मैले निर्णय गरिसकें कि यस चटनीले मलाई मोहित गर्दछ ...
तर मलाई शंका छ, क्रीम खाना बनाउने हो कि माउन्ट गर्ने हो ???
मेरो अज्ञानतालाई माफ गर्नुहोस्, तर यदि यो थर्मोमिक्स र तपाईंको ब्लगको लागि न हो भने म केही खानेकुरा गर्न सक्दिन !!!
नमस्कार, म पेड्रो क्मिनेज चटनी बनाउन चाहन्छु, तर मेरो छोरो
सुन्तलाबाट एलर्जी हुन्छ (म्यान्डारिनमा पनि)
म थोरै निम्बू धन्यवाद थप्न सक्छु
नुरियालाई जवाफ दिनुहोस्
अवश्य पनि नुरिया, तर सुन्तला भन्दा कम परिमाणमा, किनकि यसको स्वाद अधिक तीव्र छ।
नमस्कार ... बधाई नयाँ नयाँ वर्ष !!!!
तपाईंले १२ व्यक्तिको लागि अर्को टिप्पणीमा स indicated्केत गर्नुभयो भने, सबै सामग्रीहरूको रकम डबल गर्नु उत्तम थियो, तर के समयले पनि यसलाई दोब्बर बनायो?
MAIKA लाई जवाफ दिनुहोस्
गोन्जालेज सद्गुण भन्यो
हेलो मैका, मैले अर्को सन्देशको उत्तर दिएँ, केही मिनेट मात्र राख्नुहोस्, तर सावधान हुनुहोस् यो नहेर्नुहोस्…।
सब भन्दा राम्रो, नुस्खा दोहोर्याउनुहोस् ...
Virtutes González लाई जवाफ दिनुहोस्
आज संयोगले मैले तपाईंलाई भेट्टाए र म खुशी भए, किनकि मसँग केवल only महिनाको लागि थर्मोमिक्स छ
Loly लाई जवाफ दिनुहोस्
एसेन जिमेनेज भन्यो
कति राम्रो Loly! हामी तपाईंलाई यसको सक्दो मद्दतको लागि तत्पर छौं।
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद।
Ascen Jiménez लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो थर्मोमिक्स क्याप क्र्याक छ। के यो हुन सक्छ? कसैलाई हुन्छ?
योलान्डालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले आफ्नो सेल्सवुम्यानसँग कुरा गर्नुपर्नेछ वा कुनै एउटा प्रतिनिधिमण्डलमा जानुपर्नेछ।
हामीले यसलाई धेरै चोटि परिवर्तन गरिसकेका छौं, त्यसैले म जान्न चाहान्छु कि यो कसैलाई भएको छ वा छैन, के कारणका लागि हुन सक्छ
Sirloin वा duck ब्रेस्टमा थप्नको लागि मसँग पेड्रो Ximenez वाइनको प्रकारको बारेमा प्रश्न छ। के यो मिठो बोतलमा राख्छ? वा यो शेरीको अर्को प्रकार हो?
Anai लाई जवाफ दिनुहोस्
एक चोटि चटनी बनेपछि के तपाईंलाई थाहा छ यो कति लामो समय सम्म रहनेछ?
दिमागमा राख्नुहोस् कि यस चटनीमा क्रीम छ, त्यसैले यो अधिकतम or वा days दिनसम्म रहनेछ।
मेरी क्रुज भन्यो
नमस्कार, म जान्न चाहन्छु कि क्रीम ह्विप वा पकाउन छ, धन्यवाद
मेरी क्रुजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मेरी क्रुज, कुनै एक काम तपाईंको लागि। एक माउन्ट गर्न यो एक अलि मोटो बाहिर आउँछ र एक संग केहि बढी तरल पकाउन
नमस्कार !! के कसैले मस्कटेलको लागि पेड्रो ज़िमेनेजलाई प्रतिस्थापित गर्न खोजेको छ? मसँग घरमा बोतल छ, र हुनसक्छ यो दुबै मीठो दाखमद्य हो, यो राम्रो देखिन्छ ।.. मलाई भन! धन्यवाद !!
नमस्ते पिलर, यद्यपि हामीले यो प्रयास गरेका छैनौं, यो पक्कै पनि तपाईंलाई राम्रो लाग्छ! के तपाई हामीलाई परिणामको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ? हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
जोसेफी पारा सडक भन्यो
नमस्कार, मैले भर्खरै थर्मोमिक्स पाएको थिएँ र म पेड्रो जिमनेज सॉस बनाउन चाहन्छु, यो त्यो वाइन हुनु पर्छ वा यो मिठो हुनुपर्दछ, धन्यवाद
जोसेफी पारा कललाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते जोसेफी, अर्को मिठोको साथ तपाईं पनि सक्नुहुन्छ। 🙂